Dawlada Qadar oo shaacisay in Soomaalia ay ku hogaamin doonto Yoolka 2040-ka. – Xeernews24
Dawlada Qadar oo shaacisay in Soomaalia ay ku hogaamin doonto Yoolka 2040-ka.
20. September 2018 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladda Qadar ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in dowladda Soomaalia ay ka taageereyso hiisgiga sannada 2040-ka.
Dowlada Qadar ayaa tilmaantay in Soomaalia ayaa kasii gudbeyso marxaladii adkeyd iyo burburka sidaa aawgeed ay muhiim tahay in lagasii gaashanto hiigsiga Soomaalia ee 2040-ka.
Wasiirka Qorsheynta Qadar Dr Saleh bin Mohammad Al Nabit oo qaabilay wafdi uu hogaaminaayay dhigiisa Soomaalia Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in Qadar ay ku khasban tahay in Soomaalia ay ka garabsiiso hiigsiga fog.
Dr Saleh bin Mohammad Al Nabit, waxa uu sheegay in Soomaalia ay u gudubtay heerka fog oo ay ku sameysan laheyd qorshooyinka mustaqbalka, waxa uuna cadeeyay in dalka Soomaalia ay muhiim u tahay inay hesho dal kala shaqeeya hiigsiga 2040-ka.
Dr Saleh bin Mohammad Al Nabit iyo Jamaal Maxamed Xasan ay kulankooda iskaashiga labada dal ee yoolka Soomaaliya ee 2040-ka ku qeexay in Qadar aan looga maarmi doonin in Soomaalia ay ku jiheyso hiigsiga fog.
Wasiirka Qorsheynta Dalka Qadar ayaa dhiggiisa Soomaaliya ku wareejiyay hanaanka hiigsiga Qadar ee 2030-ka iyo waxyaabaha ka qabsoomay ilaa hadda si Soomaalia ay ugu dayato.
Dowladda Qadar ayaa sidoo kale ballan qaaday in Soomaalia ay ka taageereyso dhamaan dhinacyada dowladda,Arrimaha Bulshada iyo horumarinta Ganacsiga gaarka loo leeyahay.
Sidoo kale, Wasiir Jamaal ayaa dowladda Qadar uga mahad celiyay xiriirka wanaagsan ee kala dhexeeya iyo kaalinta ay ku leedahay ka qeybqaadashada horumarinta Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee, dowlada Qadar ayaa muujineysa sida ay ugu heelan tahay Soomaalia oo goor sii horeysay ku garab istaagtay khilaafka iyo duulaan Siyaasadeedka xulafada Sacuudiga.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/09/Qadar-1-324x235.jpg 235 324 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-09-20 20:55:292018-09-20 20:57:56Dawlada Qadar oo shaacisay in Soomaalia ay ku hogaamin doonto Yoolka 2040-ka.
Durmaan tun colaadeed oo Oromo iyo Amxaaro ka dhex socda. Nin caadaystay in dumarka uu Huudheello cunto geeyo ka dibbna lacagta kaga baxsado...